एरिया कन्फ्रेन्स अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएका छौँ | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
एरिया कन्फ्रेन्स अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएका छौँ
| 157 Views | Published Date : 6th May 2018 |
त्रिभवननगर जेसीजको आतिथ्यतामा यहि बैशाख २८ र २९ गते एरिया डि को एरिया कन्फ्रेन्स सम्पन्न हुँदैछ । नेपाल जेसीजको आयोजनामा हुने उक्त कन्फ्रेन्समा यस एरिया अन्तरगत रहेका ४४ वटा शाखासहित देशभरका विभिन्न शाखाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने छ ।
करिब ८ सयको सहभागिता रहने उक्त कन्फ्रेन्सको सेरोफेरोमा रहेर आथित्य शाखा त्रिभूवननगर जेसीजका अध्यक्ष लालमणी भण्डारीसँग देबु बानियाँले गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
१. २८ र २९ गते एरिया डि को क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो हुँदैँछ ?
क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यक्रम स्थलको व्यवस्थापन, अतिथि, प्रमुख अतिथि तथा अन्य आगन्तुक अतिथिहरुलाई निमन्त्रण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । प्राविधिक कुराहरु समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ । प्रचार प्रसार, सजावट तथा गेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेकोे छ । अब हामी उद्घाटनको दिनको पर्खाइमा मात्र छौँ ।
२. क्षेत्रीय सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य तथा उदेश्य के हो ?
यो सम्मेलन एरियामा रहेका जेसीज संस्थाहरुको वार्षिक साधारणसभा हो । जसमा एक वर्ष भित्र संस्थाले गरेका गतिविधिहरुलाई प्रस्तुत गर्ने, आगामि दिनका योजनाहरु ल्याउने, नेपाल जेसीजका गतिविधिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने हो । साथै एरियाभित्रका शाखाहरुको यथार्थ जानकारी समेत यस सम्मेलनमा हुनेछ । यसका साथै छिमेकी शाखाहरुबिचको सम्बन्धलाई समेत थप मजबत बनाउन सम्मेलनले सहयोग पुर्याउँछ ।
३. यस सम्मेलनमा के नयाँ प्रभावकारिता दिँदै हुनुुहुन्छ ?
जेसीज भन्ने एउटा सक्रिय युवा भन्ने बुझिन्छ । जहाँ त्यो युवा व्यसायिकता बनेको छ । जेसीजले पहिलो प्राथमिकता नै युवालाई व्यवसायिक बनाउने हो । त्यसैले यस सम्मेलनले पनि युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउँदै राष्ट्रको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्प्रेरित गर्ने छ । साथै जेसीजमा आउने नयाँ सदस्यहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै जेसीजप्रति आस्थावान बनाउँदै व्यवसायिक व्यक्ति बनाउन पनि सहयोग गर्ने छ ।
४. देशभरबाट आउने जेसीजकर्मीहरुका लागि व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि हामीले विभिन्न उपसमितिहरु निर्माण गरेका छौँ । अतिथि सत्कार, मञ्च व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापन, होटल व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका उपसमितिहरु छन् । जसले आ आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । सले गर्दा हरेक काममा सहज भएको छ । यसकारण सम्मेलनमा आउने जेसीजकर्मीहरुका लागि हामीले सकेसम्म सहज होस भन्ने उदेश्य राखेका छौँ । जसमा सम्मेलनमा आउने जेसीज साथीहरुलाई सहज होस भन्नका लागि रजिष्टर भएका शाखाहरुलाई यहाँ आउने संख्याका आधारमा कुन कोठा नम्बर सहित एसएमएस गरेका छौँ । जसले पछि आएर होटल खोज्न नपरोस् ।
५ यस सम्मेलनले तपाईहरुको शाखालाई के फाइदा पुग्छ ?
कुनै पनि शाखाले सम्मेलन गर्ने अवसर पाउनु अवसर र चुनौती दुवै हो । एरिया डि का ४४ वटा शाखाहरुको जमघट हुन्छ । एक अर्का शाखाहरुसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुन्छ । त्यसमा आफ्नो शाखाले गरेका राम्रा कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर समेत मिल्छ । यसका साथै सम्मेलनमा शाखाका लागि केही आर्थिक स्रोत समेत आम्दानी हुनेछ ।
६. नेपाल जेसीजलाई वर्ष २०१८ लाई सफल बनाउन तपाईको शाखाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ ?
नेपाल जेसीजका लक्ष्य अनुसारमा रहेर विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौँ । जसको एउटा पक्ष यो सम्मेलन पनि हो । हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरु नेपाल जेसीजमै आधार रहेर गर्ने गरेका छौँ । आम युवाहरुलाई समेटेर व्यक्तित्व र नेतृत्व विकाससँगै युवाहरुलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो उदेश्य रहेको छ । जुन नेपाल जेसीजको लक्ष्य हो । त्यसमा पनि नेपाल जेसीजको जेसीज गाउँ परियोजना अन्तरगतमा रहेर हामीले पनि जेसीज गाउँ अभियानलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसैले हाम्रा हरेक गतिविधिहरुले नेपाल जेसीजलाई केही न केही सफल बनाउन सहयोग गरिरहकै हुन्छ ।
७. यो सम्मेलन गर्नका लागि कति खर्च हुने अनुमान गर्नु भएको छ ?
सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि करिब ४० लाख खर्चको अनुमान गरिएको छ ।
८. खर्च व्यवस्थापनका लागि आम्दानीको स्रोत के छ ?
पहिलो स्रोत भनेको नै सम्मेलनमा सहभागि हुन आउने सदस्यहरुको रजिष्टेशन शुल्क हो । सबै सदस्य ३४ सय, विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरुले सहयोग, नेपाल जेसीजबाट केही रकम आउँछ । यसैगरी, स्थानीय व्यवसायीहरु, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा शुभचिन्तकहरुबाट सहयोग हुनेछ ।
९. अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
सबै भन्दा पहिले तपाई सञ्चारकर्मी साथीहरुमा हार्दिक धन्यवाद । हामीले सम्पन्न गर्न लागेको यो कन्फ्रेन्सलाई सफल बनाउनका लागि तपाईहरुले प्रचार प्रसारको क्षेत्रमा अहम भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएको छ । यो कन्फ्रेन्स दाङ जिल्लाका लागि ऐतिहासिक अवसर बन्नेछ । यसलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नु हामी सबैको उत्तिकै दायित्व रहनेछ । यसैले कन्फ्रेन्समा सहभागि भएर थप हौषला दिनु हुन सम्पूर्ण जेसीज मित्रहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।